MA Labada Qorshe (HMO SNP) - Qorshaha Caafimaadka Bulshada ee Washington - Faa'iidada Medicare
Bogga ugu weyn > Xarunta Xubinta > MA Laba Qorshe (HMO SNP)
Qorshaheena Laba-geesoodka ah ee MA (HMO SNP) wuxuu siiyaa daryeel dheeri ah xubnaha laba-qalanta leh.
Qorshaheena Laba-geesoodka ah ee MA (HMO SNP) wuxuu siiyaa caymis shaqsiyaadka u baahan caawinaad dheeraad ah si ay u helaan daryeel. Qorshaha waxaa loogu talagalay inuu daboolo baahida dadka qaata qaar ka mid ah dheefaha Medicaid.
Qorshaha MA Dual Plan (HMO SNP) wuxuu bixiyaa faa'iidooyin dheeri ah sida caymiska ilkaha ee ka hortagga ah oo dhammaystiran, adeegyada gaadiidka, daboolida gargaarka maqalka, ah gunnada miiska laga soo iibsado alaabta caafimaadka.
Barnaamijka Maaraynta Daryeelka Midaysan (IMC)
Faa'iidada Medicare ee CHPW waxay siisaa dhammaan adeegyada Barnaamijka Maareynta Daryeelka Isku-dhafan dhammaan xubnaha MA Dual Plan (HMO SNP).
Khabiir ku takhasusay IMC ayaa kaa caawin doona adiga iyo kooxdaada daryeelka caafimaadka isbeddelada daryeelka iyo kordhinta ilaha aad adigu heli karto.
Waxaad heli doontaa warqad leh qiimeyn caafimaad markii aad isqorto iyo markale sanadkiiba si aad nooga caawiso aqoonsiga meelaha aan kaa caawin karno si aan u wanaajinno baahiyahaaga daryeel caafimaad iyo taageero.
Waxaa naga go'an inaan ka caawinno xubnaha MA Dual Plan (HMO SNP) inay uga gudbaan hal daryeel una wareegaan kan xiga, iyo inay dib ugu noqdaan guryahooda caafimaad. Khabiirkaaga maaraynta daryeelka ayaa ka jawaabi doona wixii su'aalo ah ee aad ka qabto bedelida xarumaha daryeelka.
Adeegyada Caafimaadka Habdhaqanka Kaliya
Barnaamijkan waxaa loogu talagalay labada xubnood ee xaq u leh Medicaid iyo Medicare (ama kuwa bixiya khidmada adeegga). Qorshahani wuxuu bixiyaa caymis loogu talagalay adeegyada caafimaadka maskaxda oo keliya.
Qorshayaasha caafimaadka ee maamula Daryeelka la Maareeyey ee Midaysan ayaa sidoo kale bixiya qorshayaasha Adeegyada Caafimaadka Dabeecadda (BHSO) oo keliya. Haddii aad u-qalantid caymiska Apple Health oo ku salaysan adeeg-lacag-bixin, waxaad dooran kartaa qorshaha Adeegyada Caafimaadka Dabeecadda Kaliya. Macaamiisha aan dooran qorshe, HCA waxay si otomaatig ah ugu qori doontaa qorshaha BHSO. A Xaashida xaqiiqda ee BHSO waxaa laga heli karaa internetka.
Xubnaha CHPW MA Dual Plan (HMO SNP) xubnaha doonaya macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan Barnaamijka Maareynta Daryeelka Isku-dhafan, fadlan nala soo xiriir 8:00 subaxnimo ilaa 8:00 pm, toddobada maalmood ee usbuucii 1-800-942-0247 (TTY Relay: Garaac 7-1-1).